एक मोबाइल अनुकूल मैत्री डिजाइन | Martech Zone
मङ्गलबार, अक्टोबर 18, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 एडम सानो
सबै इन्टरनेट प्रवृत्तिहरू मोबाइल उपकरणमा कति ईमेलहरू पढिन्छन् भन्नेमा विशाल वृद्धिलाई औंल्याउँछ। केही तथ्या .्कले देखाउँदछ कि सबै कर्पोरेट ईमेलको %०% मोबाइल उपकरणमा पढिएको छ। पछिल्ला months महिनामा, एक मोबाइल उपकरणमा ईमेल पढ्ने १ %०% माथि छ! सानो स्क्रिनमा ईमेलहरू हेर्दा यसको कठिनाइ र फाइदाहरू हुन्छन्। केही उपकरणहरूले HTML समर्थन गर्दछ, केही पूर्वनिर्धारित रूपमा छविहरू लोड गर्दछ, केहि ईमेल खोल्नुभन्दा पहिले पूर्वावलोकन पाठ उपलब्ध हुन्छ, केहीले ईमेलको चौडाइलाई स्वत: मापन गर्दछ, र अधिकतर फन्टहरू स्केल गर्दछन् ताकि तिनीहरू पढ्नयोग्य छन्।
लिटमस यो धेरै जानकारीपूर्ण इन्फोग्राफिक प्रदान गरेको छ कि कसरी एक मोबाइल उपकरण को लागी तपाइँको ईमेल डिजाइन अनुकूलन गर्न को लागी। इन्फोग्राफिकले कार्यात्मक डिजाइनहरू र प्रदर्शनलाई असर गर्ने नुकसानहरू सिर्जना गर्नमा महत्त्वपूर्ण तत्वहरूको रूपरेखा दिन्छ। जब हामी छुट्टीको मौसम नजिकै छौं, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जब फुटकर विक्रेताहरूले ईमेल पठाउँछन् ... धेरै ग्राहकहरूले उनीहरूलाई शपिंगको रूपमा पढ्ने छन्! के तिनीहरू तपाईंको पढ्न सक्षम हुनेछन्?
जुन 9, 2012 मा 2: 52 PM
यो यति राम्रोसँग भयो, मैले यसलाई प्रिन्ट गरेको छु र यसलाई मेरो डेस्कमा राख्छु र यसलाई प्राय जसो सन्दर्भ गर्दछु। यो उत्पादनको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
जुन 9, 2012 मा 3: 38 PM
मा महान मान्छे http://www.litmus.com क्रेडिट योग्य, नोर्मा!